घर आंगनकै सरकार जनताको दुष्मन नबनोस् (सम्पादकीय)
क्यान महासंघ पर्सा उत्कृष्ट शाखाको रुपमा सम्मानित
७ लाख रुपैया सहित हुण्डी कारोबारको आरोपमा दुई भारतीय पक्राउ
सवारी चालक अनुमति परीक्षा उत्तीर्णलाई १ महिना भित्र लाइसेन्स
संसद विघटनको निर्णय खारेज भएस“गै प्रचण्ड – माधव समूह, सांसद किनबेचको फोहरी खेलमा लागेको मन्त्री प्रभु साहको आरोप
वीरगंज महानगरपालिकाको सेवाबाट कतिको सन्तुष्ट हुनुुहुन्छ ?
माघ ६, २०७७ मध्य नेपाल संवाददाता
संघीय गणतन्त्र आएपछि गाउँघरमा नै जनताको सरकार आउँछ । अधिकार गाउँमा प्राप्त हुन्छ भनी जनताले निकै ठूलो त्याग गरे ।
चप्पल लगाएर हिड्न नजान्ने धेरै अनुवांसिक नेतालाई जुत्ता लगाएर हिड्न जान्ने मात्र बनाएनन् । तिनीहरुलाई करोड बढिका सवारीमा हुईंकिने बनाए । दुई जना मानिसका अगाडी बोल्न नजान्नेलाई कुर्लिन सक्ने बनाए । काठमाण्डौको सिंहदरबारमा भएको अधिकारलाई गाउँघर सम्म लान प्रयासरत रहे । नेपाली जनताले गर्ने त यति न हो । बाँकी गर्ने त पावरमा बस्ने र जनताको नाममा भाँजो हाल्ने अनि आफ्नो रोटी सेक्नेहरुले हो । तर, विडम्बना । जनताको आशा र अपेक्षा ठिक उल्टो भएर पल्टिएको छ ।
काठमाण्डौको सिंहदरबार गाउँसम्म आइपुग्नुभन्दा पनि हरेक गाउँ र वडामा सिंह आए जस्तो मात्र भएको जनतालाई । राम्रो ठानेर ल्याएको शासन पद्धतिमा नराम्राहरुको हालिमुहाली भएको छ । जनताका हिमायती भनिएकाहरु आफूलाई बाघ भएको ठान्न थालेका छन् । आम सर्वसाधारण कर र डरको त्राहिमाममा बीच रनभूल्लमा छन् । यस्तै चपेटामा वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर २१ परवानीपुर बजारको उत्तरतर्फ राजहंश खाद्य उद्योग अगाडीका जनतालाई भएको छ ।
मध्य तराईको पर्सा, बारा लगायतका जिल्लामा पुसको शीतलहरी चलिरहेको समयमा आफ्नै गाउँघरका सरकारको साथभन्दा उनीहरुलाई पीडाको बोध थपिएको छ । एउटा उद्योग संचालकको इसारामा जनप्रतिनीधिकै अगुवाईमा जग हसाउने काम भएको पीडितको गुनासो र अहिलेको समयमा भएको निवास तोडफोडको चटारोमा स्थानीय १२ घर दलित परिवार परेका छन् । बिहान बेलुका जसोतसो आफ्नो भएको झुपडीमा टाउको लुकाउने उनीहरुको निवास भताभूँग भएको छ । चीसोबाट यहाँका सर्वसाधारणलाई बचाउन राज्यका विभिन्न निकाय र जनप्रतिनीधिले पहल गर्नु पर्नेमा सुत्केरी महिला र बालबालिका समेत नभनी उनीहरुको घर उजाडीनु जस्तो सुकै विकासे जनप्रतिनीधिको लागि पनि ठिक हो भन्न सक्ने यो समय होइन । चीसो र शीतलहरबाट सर्वसाधारणलाई बचाउनु राज्य र गैरराज्य पक्षको अहिलेको पहिलो कर्तव्य हो । धेरै त कर्तव्य निर्वाह भएका उदाहरण पनि छन् । तर परवानीपुर उत्तरतर्फ राजहंस खाद्य उद्योग अगाडी भएको बर्बर कार्य क्षमा योग्न छैन । फेरि विकास निर्माण गर्न हुँदैन भन्न खोजिएको होइन । रेल्वेको पुरानो जग्गामा बसेका वासिन्दालाई सार्वजनिक जग्गाबाट हटाइने नै हो भने पनि त्यस प्रकृतिका सबैलाई नियम लाग्ने होला । यसमा सो कार्यको अगुवाई गर्नेको नियत विसुद्ध ठिक छ भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
यो बर्ष चीसो र शीतलहरको शंकटभन्दा बासस्थान उजाडिंदा त्यो र त्यस्ता अन्य बस्तीका पनि नागरिकको अवस्था सो ठाउँमा आफै उभिएर जनप्रतिनीधिलाई आँकलन गर्न पर्ने हो । यसमा दशकौं पहिलेदेखि बस्दै आएका सर्वसाधारण ऐलानी जग्गामा नै बसेको भए पनि भेलबाडी र शीतलहरमा उनीहरुको बासस्थान जनप्रतिनीधिकै अगुवाईमा उजाडिनु हुन्न । सबैले हट्नु परे हामी पनि स्वतः हट्छौं भन्ने तिनीहरुको उठ्ने इराधालाई थोरै समय उपलब्ध गराएर कार्य सम्पादन गरिएको भए त्यसले सार्थकता पाउने थियो । स्थानीय प्रहरी प्रशासनले पनि बलमिच्याई गर्नु कुनै अर्थमा युक्तिसंगत भएन । खाँदै गरेको भात खाइसक्न पनि नदिई घरको अन्न लत्ताकपडा समेत निकाल्न नदिने भतुवाहरुको जमात सर्वसाधारणमा बस्तमा त पसेको होइन होला ? तथापि यत्ति पनि हेक्का नराखी गरिने तोडफोड क्षमा योग्य छ भन्न सकिन्न ।
#झुपडी तोडफोड #दलित परिवार # शीतलहरको सकस
मगलवार, माघ ६, २०७७, ०९:०१:००
शहिदको नाममा केवल रोइलो मात्र
संसद पूनस्र्थापना कि निर्वाचन लक्षित भेला ! (सम्पादकीय)
उदण्ड स्वार्थको खेती राजनीति
मध्यतराईमा कोभिडभन्दा शीतलहरको सकस (सम्पादकीय)
अपूर्ण पूर्वाधारमा पर्यटन प्रवद्र्धनका कुरा
विचरा कृषि प्रधान देश (सम्पादकीय)
मंसिर २२, २०७७ मध्य नेपाल संवाददाता
मध्य तराईमा पहिलो पटक व्यवस्थापक शंकाय कलेजमा शैक्षिक प्रदर्शनी समपन्न फाल्गुन २४, २०७७
युवावस्थादेखी योग गर्दा फाइदै फाईदा : अध्यक्ष गुप्ता माघ २४, २०७७